Bale & Wilshere oo ku guuleestay laacibinta sanadka 2010/2011 ee England – SBC
Bale & Wilshere oo ku guuleestay laacibinta sanadka 2010/2011 ee England
Waxaa loo doortay cayaaryahanka Gareth Bale ee u cayaara kooxda Tottenham laacibka sanadka 2010-2011 ee England, ka dib codeen eey ka qeeb galeen cayaayahano caan ah .
Waxaana kaalinta labaad galay cayaaryahanka khadka dhaxe ee kooxda Arsenal Samir Nasri, halka weeraryahanka kooxda man city Carlos Teves uu galay kaalinta sadaxaad ,waxaana tartanka si adag ugu jiray ciyaaryahano badan sida N.Vidic kabtanka kooxda man utd, iyo R.Vandervart ee Tottenham,iyo laacibaka khadka dhaxe ee kooxda Westham S.Parker .
Bale ayaa wuxuu ka mid ahaa cayaartyooyda premier league ugu fiican wuxuuna dhaliyay 7 gool , halka champions league uu ku dhaliyay 4 gool iyo sadax gool uu ka dhaliyay kooxda champions league sanadka horay qaaday Inter Milan.
Wuxuu yiri Bale “aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guuleesto abaal marinataan, gaar ahaan codeenta oo eey ka qeeb galeen cayaaryahano caan ah”
Wuxuu intaa raaciyay” ma badna cayaaryahano u dhashay gobolka Wales in ay ku guuleestaan abaal marintaan,waana arin aad ugu fiican Wales iyo aniga.waxaan rabaa inaan u hadiyeeyo abaalmarintaan saaxiibadeeda ee sanadkan I caawiyay .
Dhanka kale waxaa loo doortay cayaaryahanka khad dhaxe ee kooxda Arsenal Jack Wilsher cayaaryahanka ugu fiican ee dhalinyarada.
Wuxuu dhahay Wilshe “waa xili ciyaareedkii ugu horeeyay aan si toos ah u dhameysto waana ku farax sanahay ,laakiin kadis ayey igu aheyd maxaa yeelay si dagdag ah ayaan ugu guuleystay,waan ku fikirayay inaan noqdo cayatooyga ugu fiican laakiin si dhakhsi ah ayaan ugu guuleestay “.
Apriil 24, 2011 at 10:16 pm